Kutaura Nechido | Kuverenga Nekudzidzisa
PFUPISO YECHIDZIDZO: Taura nechido kuti ukurudzire vateereri kuita zvauri kudzidzisa.
Mashoko auchataura ngaanyure mumwoyo mako. Paunenge uchigadzirira zvauchataura, fungisisa kukosha kwemashoko acho. Gadzirira kusvika wava kunyatsoziva mashoko acho zvekuti unogona kuataura zvichibva pamwoyo.
Funga nezvevateereri vako. Fungisisa kuti zvauchaverenga kana zvauchataura zvichabatsira sei vamwe. Funga zvaungaita kuti utaure nenzira inoita kuti vateereri vanyatsokoshesa mashoko ako.
Taura zvine upenyu. Mashoko ako ngaave nesimba. Ratidza manzwiro auri kuita kuburikidza nezvaunoita chiso chako uyewo nekushandisa nhengo dzemuviri sezvaunongoita mazuva ese.
Kuti urege kuvhiringidza vateereri, usaite katsika kekungoshandisa nhengo imwe chete yemuviri. Zvaunoita zvinofanira kuenderana nezvauri kutaura. Paunenge uchitaura pfungwa huru kana kuti uchikurudzira vateereri vako kuita zvauri kutaura ndipo paunofanira kuwedzera kuva nechido. Asi kana ukazonyanyisa kuratidza chido kubva hurukuro ichitanga kusvika yapera, unonetesa vateereri vako.
Zvii zvaungaita kuti ukurudzire vateereri vako kuita zvauri kutaura?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kutaura Nechido
Kuverenga Nekudzidzisa—Kutaura Nechido
th chidzidzo 11 p. 14